मनोरञ्जन केन्द्र "Prometheus" (चेबोकसारी) अचम्मको प्राकृतिक दृश्यहरु छ
प्राकृतिक खनिज पानी, ताजा हावा, सुंदर प्रकृति वोल्गा सही बैंक पक्ष मा धनी डिबग। संयुक्त सबै यो रिसोर्ट र स्पा छुट्टी को लागि एक अद्वितीय सेटिङ सिर्जना गर्छ। "Prometheus" सबैभन्दा लोकप्रिय स्थानहरूको एक मनोरञ्जन केन्द्र हो। चेबोकसारी - शहर यो क्षेत्र को मोती भनिन्छ जो, केही किलोमिटर टाढा छ।
संरक्षित क्षेत्र उज्ज्वल नाम "Prometheus" अन्तर्गत स्थित "Zavolzhye" आरामदायक छात्रावास मा वोल्गा नदीको सुन्दर बैंकहरू मा। यस क्षेत्रमा खुसी क्रिस्टल-स्पष्ट हावा, शताब्दीयौंदेखि पुरानो पाइन रूखहरू वन, जंगली जामुन र मशरूम को एक प्रशस्त छ। के बाहिर आनंद भन्दा राम्रो हुन सक्छ? मात्र उनको मानिस अनुरूप पूर्ण relaxes र वास्तविक खुशी हुन्छ। सबै भन्दा राम्रो छनोट सप्ताह लागि विभिन्न घटनाहरू र बिदा हुनेछ मनोरञ्जन केन्द्र "Prometheus"। चेबोकसारी यो तपाईं कुनै पनि समयमा यहाँ प्राप्त गर्न अनुमति राम्रो परिवहन लिंक।
आधार "Prometheus" अतिथि सबै वर्ष दौर स्वीकार्नुहुन्छ। आराम एघार सहज कटेज प्रदान गर्दछ। क्षमता आधार तीन सय मान्छे छ। दुई-मंजिल्ला घरहरू बाह्र व्यक्ति सम्म समायोजित गर्ने क्षमता छ। 150 वर्ग अधिकतम सुधार क्षेत्र। मीटर। सबै कटेज तपाईं पनि कूलर मौसम मा, प्रकृति मा एक आरामदायक बाँकी रमाइलो गर्न अनुमति दिने, Fireplaces र हीटर संग सुसज्जित छन्। यो आरामदायक भान्सा आधुनिक उपकरण र इलाका र भोजन सबै सामान संग सुसज्जित छ। कोठा - आरामदायक फर्नीचर, उपग्रह टीवी। र मनोरञ्जन केन्द्र "Prometheus" (चेबोकसारी) द्वारा के अद्भुत परिदृश्य घेरिएको! फोटो अचम्मको प्राकृतिक परिदृश्य को सौन्दर्य व्यक्त गर्न सक्दैन।
मौका आधारमा vacationers लागि रूसी र भ्रमण गर्न फिनिस स्नान। यो छुट्टी आराम र शरीर शुद्ध गर्न मद्दत गर्छ, र पूल मा स्विमिंग ताजगी र ऊर्जा ल्याउनेछ। अन्य के मनोरञ्जन मनोरञ्जन केन्द्र "Prometheus" प्रदान गर्दछ? चेबोकसारी शहर र वरपर जाडो खेल उत्कृष्ट अवस्था हो। आधार मा आधुनिक स्की जटिल संग सुसज्जित छ। उपयोगी र रोचक सोख स्लेडिङ, आइस स्केटिङ हुनेछ। सबै सामान भाडामा गर्न सकिन्छ। र गर्मी मा सबै भन्दा लोकप्रिय समुद्र तट छुट्टी हो। अतिथिहरूको पनि catamaran मा एक सवारी आनन्द उठाउन सक्छौं। माछा मार्ने उत्साही लागि सबै अवस्था। इलाका मा छोराछोरीको खेल को मैदानों छन्। देश मोबाइल फोन को मुख्य आपूर्तिकर्ता को क्षेत्र मा मनोरञ्जन केन्द्र "Prometheus" छ। चेबोकसारी कोटिंग यस्तो टन, "मेघाफोन", "Biline" र अरूलाई रूपमा सञ्चार सेवाहरू समावेश गर्नुहोस्।
बुकिंग र भुक्तानी
आदेश बुकिंग सेवाहरू द्वारा फोन डेटाबेस प्रशासक सम्पर्क गर्नुपर्छ। आकर्षक मूल्य निर्धारण नीति "Prometheus" (मनोरञ्जन केन्द्र, चेबोकसारी) छ। मनोरञ्जन सेवाहरूको मूल्य एकदम स्वीकार्य छ - यो जनसंख्या को सबै विभाग पहुँचयोग्य प्रकृति मा छुट्टी बनाउँछ। बन्दोबस्त बाहिर शिविरमा साइट मा दिन को समयमा एक बाँकीको लागि एक सुविधाजनक समय मा लगे छ। हप्ताको समयमा आवास को लागि मूल्य साप्ताहअन्त भन्दा भन्दा एकदम कम हुनेछ।
यस डन को Tributaries। यस डन को बाँकी tributary
Nikolaevka, "दक्षिण" बोर्डिङ घर - सम्पूर्ण परिवारको लागि Crimea मा बाँकी
कलिनिन्ग्राद: "मत्स्य पालन गाउँ" ठेगाना
विभिन्न निर्देशनहरू देखि मेट्रो द्वारा लाल वर्ग प्राप्त गर्न कसरी
हरियो पर्यटन hotbed - भालु नदी
असह्य अनुकूलता। Scorpio र लियो - चक्कु छुरा मा प्रेम
"Chervona viburnum" अस्पताल, s.Zhobrin, रिव्ने क्षेत्र: विवरण, सेवा र पर्यटकहरु को समीक्षा
गाढा र कालो फर: कारण र रोग को लक्षण
एक वर्षा सेन्सर के हो?
फारम, समारोह र शुक्राणु सेल को आकार
तुलसी के हो? तुलसी बीउ, बिरुवा, रोपण
पानी छर्कने प्रणाली: सञ्चालन सिद्धान्त
टमाटर "चमत्कार गुलाब": प्रजातिहरू विवरण र सुविधाहरू
व्यक्तित्व गुणस्तर रूपमा Strictness